သရေနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ လန်ဒန်ဒါဘီ ပြီးနောက် ဂရေမီဆောင်းနက် နဲ့ ဂယ်ရီနဗီး တို့ရဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမား ၂ဦး - SPORTS MYANMAR
သရေနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ လန်ဒန်ဒါဘီ ပြီးနောက် ဂရေမီဆောင်းနက် နဲ့ ဂယ်ရီနဗီး တို့ရဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမား ၂ဦး
ဂရေမီဆောင်းနက် နဲ့ ဂယ်ရီနဗီး တို့ဟာ မနေ့ညက မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီ ပွဲစဉ်မှာ တော့တင်ဟမ်ကို ၂ဂိုးအသာနဲ့ ဦးဆောင် သွားစေနိုင်မယ့် ပင်နယ်တီ ကို ခွင့်ပြု စေခဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံ ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းခေါင်းဆောင် ဂရာနစ်ဇာခါ ရဲ့ မဆင်မခြင် ဖျက်ထုတ်မှုကို ဝေဖန်ပြစ်တင် သွားခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ အမ်းမရိတ်မှာ ပွဲကို အကောင်းဆုံး စတင် နိုင်ခဲ့ပြီး ဒီပွဲမှာ တော့တင်ဟမ် ရဲ့ ညာနောက်ခံလူ အဖြစ် ကစားသွားခဲ့တဲ့ ဒေဗာဆင်ဆန်းချက်ဟာ ပွဲအစပိုင်းမှာ ရုန်းကန် နေခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း စပါးအသင်းဟာ ပွဲအစ ၁၀ မိနစ်မှာ ဦးဆောင်ဂိုး အရင် ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ဟယ်ရီကိန်း ခေါင်းတိုက် ချပေးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကို အဲရစ်လာမယ်လာ က ဆွဲပြေးကာ ကန်သွင်းခဲ့ပြီး ဒီကန်ချက်ချက်ကို လီနို ပုတ်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အဲရစ်ဆင်က ပြန်ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို အသာပိတ်သွင်း သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ဂိုးရဖို့ ပြန်လည် အားထုတ် ခဲ့ပေမယ်လည်း နောက်ထပ် ဂိုးရသွားခဲ့တာကတော့ ဧည့်သည် အသင်းပဲ ဖြစ်ပြီး ပထမပိုင်း ပြီးဖို့ ငါးမိနစ် အလိုမှာ ဇာခါဟာ ပင်နယ်တီ ဧရိယာ ထဲမှာ ဆွန်ဟောင်မင်း ကို လျှောထိုး ဖျက်ထုတ်ရာမှာ ဘောလုံး မထိခဲ့တာကြောင့် အာဆင်နယ် တို့ ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့ရပြီး ကိန်းက အဆုံးသတ် ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်ကာဇက် ဟာ ပထမပိုင်း မပြီးခင်လေးမှာ အာဆင်နယ် အတွက် ချေပဂိုး တစ်ဂိုး ပြန်သွင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ အူဘာမီယန်း ဟာ ဂွမ်ဒူဇီရဲ့ ဖြတ်တင်ဘော ကနေ ပိတ်သွင်းယူ ခဲ့ကာ ချေပဂိုး ပြန်လည် ရယူပေး ခဲ့ပြီး ပွဲဟာ ၂ ဂိုးစီသရေနဲ့ပဲ ပြီးသွားခဲ့ကာ လန်ဒန်မြို့ခံ နှစ်သင်း တစ်မှတ်စီ ခွဲယူ ခဲ့ကြပါတယ်။
ဇာခါရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ဖျက်ထုတ်မှု အပေါ် ဆောင်းနက်က “ဒီနေရာမှာ ဟယ်ရီဝင့် အကောင်းဆုံး လုပ်ခဲ့ကာ မစ်လန်းနိုင်းကို ကျော်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှု လုပ်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။ ဂရာနစ်ဇာခါ ရဲ့ ပြစ်ဒဏ် ကျူးလွန်မှု ကကော ဘယ်လိုလဲ?
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံး လောကကို ခြေချလာတဲ့ ပထမဦးဆုံး ရက်သတ္တပတ်မှာ ခြေလွန် သွားတာတွေ ၊ ခြေမခိုင် တာတွေ မဖြစ်ဖို့ အတွက် ဒါတွေဟာ လေ့လာ သင်ယူ ရတဲ့ အရာပါ။ အထူးသဖြင့် ပင်နယ်တီ ဧရိယာထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပုံစံဟာ အန္တရာယ်ကို ကြီးကြီးမားမား ဖိတ်ခေါ် လိုက်တာ ပါပဲ။
ဒါဟာ အရမ်းကို သိသာလွန်းတဲ့ ပင်နယ်တီ ။ အကယ်၍ သူ ဆွန်ကို မထိခိုက် မိခဲ့ဘူး ဆိုရင်တောင် ဒါဟာ ဆွန်ကို မြေပေါ် လဲကျအောင် ဖိတ်ခေါ် လိုက်သလို ပါပဲ။ ပင်နယ်တီ ကတော့ အံ့သြဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် ကောင်းမွန် ပါတယ်။ ကိန်းရဲ့ ထောင့်ထဲကို ကန်ချက် က နေရာယူ မှန်ရင်တောင် ဖမ်းမိ နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဇာခါ ကိစ္စကို ကြည့်လိုက်ပါယ။ သူဟာ အသက် ၂၆ နှစ် အရွယ် ကစားသမား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမား ဘ၀ ပထမဦးဆုံး အပတ်မှာ လေ့လာ ခဲ့ရတဲ့ အရာပါ။ ကျက်သရေတုန်း ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ယူနို်က်တက် ဂန္တ၀င် ဂယ်ရီနဗီး ကလည်း ဆောင်းနက် လိုပဲ ဇာခါရဲ့ အမှားကို စိတ်ပျက်နေပြီး ဆွစ်ဇာလန် လက်ရွေးစင်ဟာ တူညီတဲ့ အမှားတွေပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ကျူးလွန် နေပြီး သင်ယူမှုလည်း မရှိဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
နဗီးက “ဇာခါရဲ့ ရူးမိုက်မှု ပါပဲ။ အတွေ့အကြုံရှိ ကစားသမား တစ်ဦးဟာ လုံးဝ အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတဲ့ ကစားသမားလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူဒီလို အမှားတွေ လုပ်တာကို အပတ်တိုင်း အပတ်တိုင်း ရာသီတိုင်း ရာသီတိုင်း မြင်တွေ့ နေခဲ့ ရပါတယ်။ သူဒါတွေကို လေ့လာ သင်ယူတဲ့ပုံလည်း မရှိပါဘူး။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဂယ်ရီနဗီးက တော့တင်ဟမ် ရဲ့ အဖွင့်ဂိုး အတွက် ဆိုကရေးတီး ရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ခံစစ် ကစားပုံကိုလည်း ဝေဖန် ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဟယ်ရီကိန်းဟာ ဂရာနစ်ဇာခါ နဲ့ အပြိုင်ခေါင်းတိုက် ရာမှာ အသာ ရခဲ့ပြီး တော့တင်ဟမ် တို့ တိုက်စစ် လမ်းကြောင်း ပုံပေါ် သွားခဲ့ပေမယ့် ဆိုကရေးတီးဟာ မလိုအပ်ဘဲ ရှေ့တက်ကာ ခေါင်းအပြိုင် တိုက်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ဂန်နားတို့ရဲ့ နောက်တန်းကို ကြီးမားတဲ့ နေရာလွတ် ဖြစ်သွား စေခဲ့ပြီး တော့တင်ဟမ် တို့ ဦးဆောင်ဂိုး ရသွားတဲ့ အခြေအနေထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နဗီးက “ဒီခေါင်းတိုက်ချက်မှာ ဆိုကရေးတီးရဲ့ လုပ်ပုံဟာ အတော် ဆိုးရွားတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဗဟိုနောက်ခံလူ တစ်ဦး ဒီလိုမျိုး အားထုတ်မှုကို လုပ်မယ် ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ အနည်းငယ် ပြိုင်ဘက်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ အနေအထားတော့ ရှိခဲ့ သင့်ပါတယ်။ ဇာခါဟာ ကိန်းနဲ့ ခေါင်းအပြိုင် တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျား ဆိုကရေးတီးကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဆိုလိုတာက ဒါဟာ ဗဟိုနောက်ခံလူ တစ်ဦး လုပ်ရမယ့် challenge မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အနေနဲ့ ဒီလိုလုပ်မယ် ဆိုရင် ပြိုင်ဘက်ကို လွှမ်းမိုး နိုင်ရမယ့် အပြင် အစွမ်းကုန် အားထုတ် သွားရမှာပါ။
ဇာခါဟာ ကိန်းရဲ့ အောက်မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆိုကရေးတီး လုပ်ပုံကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလို လုပ်လို့ မရပါဘူး။ အဲဒီနောက် ရုတ်တရက် ဆိုသလိုပဲ ကိန်းရဲ့ အမြင့်ဘော အသာရ ခဲ့မှုဟာ တိုက်စစ်လမ်းကြောင်း ပွင့်သွား စေခဲ့ပြီး ကျန်တာကတော့ တွေ့တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
သရနေဲ့ အဆုံးသတျခဲ့တဲ့ လနျဒနျဒါဘီ ပွီးနောကျ ဂရမေီဆောငျးနကျ နဲ့ ဂယျရီနဗီး တို့ရဲ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဝဖေနျခွငျးကို ခံခဲ့ရတဲ့ အာဆငျနယျ ကစားသမား ၂ဦး
ဂရမေီဆောငျးနကျ နဲ့ ဂယျရီနဗီး တို့ဟာ မနညေ့က မွောကျလနျဒနျဒါဘီ ပှဲစဉျမှာ တော့တငျဟမျကို ၂ဂိုးအသာနဲ့ ဦးဆောငျ သှားစနေိုငျမယျ့ ပငျနယျတီ ကို ခှငျ့ပွု စခေဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံ ဖွဈတဲ့ အာဆငျနယျ အသငျးခေါငျးဆောငျ ဂရာနဈဇာခါ ရဲ့ မဆငျမခွငျ ဖကျြထုတျမှုကို ဝဖေနျပွဈတငျ သှားခဲ့ပါတယျ။ အာဆငျနယျ အသငျးဟာ အမျးမရိတျမှာ ပှဲကို အကောငျးဆုံး စတငျ နိုငျခဲ့ပွီး ဒီပှဲမှာ တော့တငျဟမျ ရဲ့ ညာနောကျခံလူ အဖွဈ ကစားသှားခဲ့တဲ့ ဒဗောဆငျဆနျးခကျြဟာ ပှဲအစပိုငျးမှာ ရုနျးကနျ နခေဲ့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး စပါးအသငျးဟာ ပှဲအစ ၁၀ မိနဈမှာ ဦးဆောငျဂိုး အရငျ ရသှားခဲ့ပါတယျ။ ဟယျရီကိနျး ခေါငျးတိုကျ ခပြေးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကို အဲရဈလာမယျလာ က ဆှဲပွေးကာ ကနျသှငျးခဲ့ပွီး ဒီကနျခကျြခကျြကို လီနို ပုတျထုတျ နိုငျခဲ့ပမေယျ့လညျး အဲရဈဆငျက ပွနျထှကျလာတဲ့ ဘောလုံးကို အသာပိတျသှငျး သှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အာဆငျနယျ အသငျးဟာ ဂိုးရဖို့ ပွနျလညျ အားထုတျ ခဲ့ပမေယျလညျး နောကျထပျ ဂိုးရသှားခဲ့တာကတော့ ဧညျ့သညျ အသငျးပဲ ဖွဈပွီး ပထမပိုငျး ပွီးဖို့ ငါးမိနဈ အလိုမှာ ဇာခါဟာ ပငျနယျတီ ဧရိယာ ထဲမှာ ဆှနျဟောငျမငျး ကို လြှောထိုး ဖကျြထုတျရာမှာ ဘောလုံး မထိခဲ့တာကွောငျ့ အာဆငျနယျ တို့ ပငျနယျတီ ပေးခဲ့ရပွီး ကိနျးက အဆုံးသတျ ခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ လကျကာဇကျ ဟာ ပထမပိုငျး မပွီးခငျလေးမှာ အာဆငျနယျ အတှကျ ခပြေဂိုး တဈဂိုး ပွနျသှငျး ပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ အူဘာမီယနျး ဟာ ဂှမျဒူဇီရဲ့ ဖွတျတငျဘော ကနေ ပိတျသှငျးယူ ခဲ့ကာ ခပြေဂိုး ပွနျလညျ ရယူပေး ခဲ့ပွီး ပှဲဟာ ၂ ဂိုးစီသရနေဲ့ပဲ ပွီးသှားခဲ့ကာ လနျဒနျမွို့ခံ နှဈသငျး တဈမှတျစီ ခှဲယူ ခဲ့ကွပါတယျ။
ဇာခါရဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ ဖကျြထုတျမှု အပျေါ ဆောငျးနကျက “ဒီနရောမှာ ဟယျရီဝငျ့ အကောငျးဆုံး လုပျခဲ့ကာ မဈလနျးနိုငျးကို ကြျောပွီး ကောငျးမှနျတဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှု လုပျနိုငျ ခဲ့ပါတယျ။ ဂရာနဈဇာခါ ရဲ့ ပွဈဒဏျ ကြူးလှနျမှု ကကော ဘယျလိုလဲ?
ပရျောဖကျရှငျနယျ ဘောလုံး လောကကို ခွခေလြာတဲ့ ပထမဦးဆုံး ရကျသတ်တပတျမှာ ခွလှေနျ သှားတာတှေ ၊ ခွမေခိုငျ တာတှေ မဖွဈဖို့ အတှကျ ဒါတှဟော လလေ့ာ သငျယူ ရတဲ့ အရာပါ။ အထူးသဖွငျ့ ပငျနယျတီ ဧရိယာထဲမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ပုံစံဟာ အန်တရာယျကို ကွီးကွီးမားမား ဖိတျချေါ လိုကျတာ ပါပဲ။
ဒါဟာ အရမျးကို သိသာလှနျးတဲ့ ပငျနယျတီ ။ အကယျ၍ သူ ဆှနျကို မထိခိုကျ မိခဲ့ဘူး ဆိုရငျတောငျ ဒါဟာ ဆှနျကို မွပေျေါ လဲကအြောငျ ဖိတျချေါ လိုကျသလို ပါပဲ။ ပငျနယျတီ ကတော့ အံ့သွဖှယျ ကောငျးလောကျအောငျ ကောငျးမှနျ ပါတယျ။ ကိနျးရဲ့ ထောငျ့ထဲကို ကနျခကျြ က နရောယူ မှနျရငျတောငျ ဖမျးမိ နိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဇာခါ ကိစ်စကို ကွညျ့လိုကျပါယ။ သူဟာ အသကျ ၂၆ နှဈ အရှယျ ကစားသမား ဖွဈပါတယျ။ ဒါမြိုးဟာ ပရျောဖကျရှငျနယျ ကစားသမား ဘဝ ပထမဦးဆုံး အပတျမှာ လလေ့ာ ခဲ့ရတဲ့ အရာပါ။ ကကျြသရတေုနျး ပါတယျ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
မနျခကျြစတာ ယူနျိုကျတကျ ဂန်တဝငျ ဂယျရီနဗီး ကလညျး ဆောငျးနကျ လိုပဲ ဇာခါရဲ့ အမှားကို စိတျပကျြနပွေီး ဆှဈဇာလနျ လကျရှေးစငျဟာ တူညီတဲ့ အမှားတှပေဲ ထပျခါထပျခါ ကြူးလှနျ နပွေီး သငျယူမှုလညျး မရှိဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
နဗီးက “ဇာခါရဲ့ ရူးမိုကျမှု ပါပဲ။ အတှအေ့ကွုံရှိ ကစားသမား တဈဦးဟာ လုံးဝ အတှအေ့ကွုံ မရှိသေးတဲ့ ကစားသမားလို ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျော သူဒီလို အမှားတှေ လုပျတာကို အပတျတိုငျး အပတျတိုငျး ရာသီတိုငျး ရာသီတိုငျး မွငျတှေ့ နခေဲ့ ရပါတယျ။ သူဒါတှကေို လလေ့ာ သငျယူတဲ့ပုံလညျး မရှိပါဘူး။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး ဂယျရီနဗီးက တော့တငျဟမျ ရဲ့ အဖှငျ့ဂိုး အတှကျ ဆိုကရေးတီး ရဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ ခံစဈ ကစားပုံကိုလညျး ဝဖေနျ ခဲ့ပါသေးတယျ။ ဟယျရီကိနျးဟာ ဂရာနဈဇာခါ နဲ့ အပွိုငျခေါငျးတိုကျ ရာမှာ အသာ ရခဲ့ပွီး တော့တငျဟမျ တို့ တိုကျစဈ လမျးကွောငျး ပုံပျေါ သှားခဲ့ပမေယျ့ ဆိုကရေးတီးဟာ မလိုအပျဘဲ ရှတေ့ကျကာ ခေါငျးအပွိုငျ တိုကျဖို့ ကွိုးစား ခဲ့ပွီး ဒါဟာ ဂနျနားတို့ရဲ့ နောကျတနျးကို ကွီးမားတဲ့ နရောလှတျ ဖွဈသှား စခေဲ့ပွီး တော့တငျဟမျ တို့ ဦးဆောငျဂိုး ရသှားတဲ့ အခွအေနထေိ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
နဗီးက “ဒီခေါငျးတိုကျခကျြမှာ ဆိုကရေးတီးရဲ့ လုပျပုံဟာ အတျော ဆိုးရှားတယျလို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ။ အကယျ၍ ဗဟိုနောကျခံလူ တဈဦး ဒီလိုမြိုး အားထုတျမှုကို လုပျမယျ ဆိုရငျ သူ့အနနေဲ့ အနညျးငယျ ပွိုငျဘကျနဲ့ ယှဉျပွိုငျရတဲ့ အနအေထားတော့ ရှိခဲ့ သငျ့ပါတယျ။ ဇာခါဟာ ကိနျးနဲ့ ခေါငျးအပွိုငျ တိုကျခဲ့ပါတယျ။ ခငျဗြား ဆိုကရေးတီးကို ကွညျ့လိုကျပါဦး။ ဆိုလိုတာက ဒါဟာ ဗဟိုနောကျခံလူ တဈဦး လုပျရမယျ့ challenge မဟုတျပါဘူး။ သူ့အနနေဲ့ ဒီလိုလုပျမယျ ဆိုရငျ ပွိုငျဘကျကို လှမျးမိုး နိုငျရမယျ့ အပွငျ အစှမျးကုနျ အားထုတျ သှားရမှာပါ။
ဇာခါဟာ ကိနျးရဲ့ အောကျမှာ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဆိုကရေးတီး လုပျပုံကို ကွညျ့လိုကျပါ။ ဒီလို လုပျလို့ မရပါဘူး။ အဲဒီနောကျ ရုတျတရကျ ဆိုသလိုပဲ ကိနျးရဲ့ အမွငျ့ဘော အသာရ ခဲ့မှုဟာ တိုကျစဈလမျးကွောငျး ပှငျ့သှား စခေဲ့ပွီး ကနျြတာကတော့ တှတေဲ့ အတိုငျးပါပဲ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။